> Resource > Ladnaansho > Sida loo gaaro Hard Drive Data Recovery u Win iyo Mac OS X
Calaamadaha drive adag khasaaro xogta
1. recycle bin faaruqa ah ama Trash.
2. Si qalad ah qaab drive adag oo aan gurmad.
3. Waayaya xogta ka dib markii nidaamka soo celiyo.
4. Hawlgal ah khalad ku jira ka dib markii qoruhu ku rakibidda nidaam hawlgal cusub (sida Mac OS X in Windows, ama Windows ee Mac OS X.
5. drive The adag si macquula kharribeen ama burburtay, awoodin in ay helaan xogta ama faylasha.
6. miiska xijaab waxaa corruptted ama waxyeelo.
7. drive Hard noqdo geli karin sababo la xiriira inflection virus.
Sidee inuu ka soo kabsado xogta lumay ka gaari ku adag?
Weli waxaa jira sababo dheeraad ah oo keenaya drive adag khasaaro xogta. Sida xaqiiqadu, inaad marwalba leeyihiin fursad ay sameeyaan soo kabashada disk adag ilaa iyo inta talaabo sax ah waxa laga soo qaatay oo ma jiraan wax qasaaro jirka drive adag. kabashada xogta drive Hard Waa ku filan tahay inuu ka soo kabsado xogta ka wadid aad u adag.
Haddii aad tahay user Windows ah, Wondershare Data Recovery waa sida awood leh oo la isku hallayn karo software kabashada disk si aad u soo kabsado files ka drive adag ee adiga ku gaar ah. Waxa ay taageertaa dib u soo kabashada badiyay xogta ka dhan xaaladaha kor ku xusan. Haddii aad tahay user Mac, u leexdo xagga Wondershare Data Recovery for Mac .
Talooyin: HA rakibi barnaamijka Data Recovery in Risaalo ka mid ah meesha aad xogta laga badiyay iskaga overwriting xogta asalka ah.
Halkan qaadataa Data Recovery for Windows sida tusaale.
Talaabooyinka si ay u gaaraan Hard Drive Data Recovery for Windows
Talaabada 1: Burcad software ka dooro mid ka mid ah hababka dib u soo kabashada Sidaad u sabab khasaaro xogta.
• masaxay / Khasaaray Recovery File - kabashada xogta ka disk adag marka aad ku amri Shift + Del ama aad u faaruqiso Recycle Bin. Oo waxay soo ceshano formatted iyo xogta xitaa qaab-dhismeedka galka dhamaystiran lumay xijaab formatted ama macquul ah u kharribmay.
• Recovery ah Barzakh, -. Ladnaansho xijaab laga badiyay iyo xog la'aan awgeed xijaab, takhalusid xijaab, iyo baadi xijaab
• ceeriin Recovery - Deep scan iyo kabsado xogta xitaa marka nidaamka file kharribmay.
• Recovery biloow - badbaadi iyo dajiyaan natiijada hore scan u soo kabashada xog joogto ah oo aan rescanning.
Talaabada 2: Dooro HDD aad rabto in aad soo kabsado xogta ka.
Step3: Guudmar files iyo ogaato faylasha aad u baahan tahay.
Talaabada 4: Dooro meel si loo badbaadiyo macluumaadka recoverable.
Video tutorial soo kabashada xogta drive adag
Talooyin wanaagsan Fursada Hard Drive Data Recovery
1. Ka hor inta soo kabashada xogta disk adag , isla markiiba joojiso isticmaalka drive adag oo wuxuu dhigay meel ammaan ah in kiiska dhaawac kasta oo jirka laga yaabaa inuu dhaco.
2. Marka aad qaadato drive adag software kabashada xogta inuu ka soo kabsado files, si fiican loo badbaadiyo files soo kabsaday si disk kale ee overwriting xogta kiiska.